Kafeega Dalgona, kafeega fayras | Cuntooyinka Jikada
Maria vazquez | 12/09/2021 10:00 | Cabitaanka
Kafeega dalgona waa qaxwe noocee ah? Waxaan isweydiiyey isla su’aashan dhowr toddobaad ka hor, markii aan arkay isaga oo lagu sheegay shabakadayda. Hadda, waan ogahay inay tahay a qaxwaha kareemka leh ee xiiqsan kaasoo ku dhashay Kuuriyada Koofureed intii lagu jiray marxaladdii ugu horreysay ee masiibada wuxuuna sababay buuq ka dhashay shabakadaha, gaar ahaan Tik Tok,
Karantiilkii ugu horreeyay, sidaan akhriyay, waxay noqotay wax la moodo in la wadaago diyaarinta qaxwadaan Tik Tok. Shabakad aanan adeegsan, taas oo ah sababta aanan u helin ilaa hadda. Waana wax laga xishoodo, maxaa yeelay qaxwadaani waa ku habboon xagaaga oo ay weheliyaan xoogaa baraf ah. Miyaad ku dhiirrataa inaad isku daydo?
Waxaad u baahan tahay oo kaliya afar maaddo, saddex u dhiganta, si aad u diyaariso: qaxwaha, sonkorta, biyaha kulul iyo cabitaanka caanaha ama khudradda. Waxaa intaa dheer, dabcan, isku -darka; korontada haddii aadan rabin inaad ku qaadato 10 daqiiqo inaad gacanta ku kiciso qaxwada. Markaad samayso, waxaad ku qurxin kartaa qorfe, kookaha ama xataa malab. Miyaadan hore u rabin inaad isku daydo? Ku dar qaar shukulaatada shukulaatada isla'egta waxaadna yeelan doontaa cunto fudud oo kaamil ah.
Kafeega Dalgona waa qaxwaha kareemka leh oo dhalaalaya oo ku dhashay Kuuriyada Koonfureed kuna faafay qaybta koowaad ee masiibada iyada oo loo marayo shabakadaha bulshada.
Nooca cuntada: Cabitaanka
Wadarta waqtiga: 5 m
2 qaado oo qaxwada milmay
2 qaado oo sonkor ah
2 qaado oo biyo kulul ah
Caano ama cabitaan khudaar ah
Ku jira galaas blender ama baaquli waxaan garaacnay qaxwaha milma, sonkorta iyo biyaha kulul, ilaa ay ka dhumucdo oo aan helno kareemka kafeega. Waxay qaadan doontaa hal ama laba daqiiqo in la sameeyo; xoogaa dheeraad ah haddii aad isticmaasho qalabka wax lagu qaso.
Markaad samayso, dhig barafka barafka haddii aad rabto, galaaska dhexdiisa oo ka buuxi ⅔ caano ama cabbitaan khudaar ah. Ka dib, taaj leh kareem kafee.
Isla markiiba u adeeg qaxwaha dalgona.
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Cabitaanka » Kafeega Dalgona, kafeega fayras